Iindaba -Uwukhetha njani umzi-mveliso wasesibhedlele?
Ngoku, intengiso yeminyango yesibhedlele elona xesha lililo, ke maninzi amashishini abandakanyekayo kuwo. Ke ababoneleli beminyango yesibhedlele kwiimarike baninzi kakhulu ukuba bangabala! Ndiyakholelwa ukuba abantu abaninzi baneengxaki zabo xa bekhetha umnyango wesibhedlele. Zininzi izinto onokukhetha kuzo ezibangela uxinezeleko.
Ngapha koko, zimbini iindlela. Enye kukufumana abantu abathengile kufutshane ukuze babuze, amava omsebenzisi yeyona nto ithe ngqo; Okwesibini kukwazi imeko yangoku umthengisi kunye namava abo kwishishini lomnyango wesibhedlele, khetha ezo ntengiso zinkulu, abavelisi abanesidima kunye namava bahlala bekhuselekile ngakumbi!
Ewe kunjalo, ukuba iimeko ziyavuma, kungcono ukuya kutyelela umzi-mveliso wabathengisi beminyango yesibhedlele. Le yeyona ndlela ilula kwaye isebenzayo, kodwa ikwayeyona inokuthenjwa. Kwaye kuya kubakho isiqinisekiso esikhulu senkonzo emva kokuthengisa.
Oku kungasentla ngumbono omncinci wokukhetha kwabavelisi beminyango yesibhedlele. Ngokubanzi, ukhetho lweengcango zesibhedlele ngokungqinelana neemfuno zazo phantsi kwesiseko, kangangoko kunokwenzeka ukukhetha umlinganiselo omkhulu, abathengisi abomeleleyo!